Ukonwaba !!! Amava elali (Sultan Bathery) - I-Airbnb
Ukonwaba !!! Amava elali (Sultan Bathery)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBijith
Wamkelekile kwi-villa yethu encinci epholileyo kwipropathi ebiyelweyo eyi-acre kwilali entle kunye nebukekayo iKoleri eWayanad.
Ubuncinci ngaphandle kokuyekelela kwiimfuno ngumxholo esiwamkeleyo. Iibhedi ezicocekileyo, imithwalo emitsha, iingubo, iitawuli, isepha, ishampu, izindlu zangasese ezicocekileyo kunye nebhafu eneshawa yamanzi ashushu yiminikelo yethu kuzo zonke iindwendwe.
Silandela izikhokelo zikarhulumente kwimigaqo yogutyulo. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ube namava amnandi asemaphandleni.
Ipropathi ebiyelweyo eyi-acre e-1 enezityalo zekofu, imithi yekhokhonathi, intsimi yebhanana njl.njl ejonge kwibala lepaddy ngasemva kunye nendlela ngaphambili. Zimbalwa izindlu elumelwaneni . Indawo ikhuseleke kakhulu nangona ngamanye amaxesha unokuziva uzimele kwaye ukude nesiphithiphithi.
I-cottage inemigangatho emibini . Umgangatho ophezulu unegumbi lohlobo lwesitudiyo kunye nesilingi ephezulu ye-cathedral, ibhedi yobukhulu benkosi, i-pantry, igumbi lokuhlambela langoku elinezixhobo zeJaquar, i-balcony ejongene neNdlela yeLali kunye nethafa elijongene nebala le-paddy. Iindwendwe zingonwabela imbonakalo entle yeentaba ezinenkungu kwangentseni ukusuka ethafeni.
Umgangatho osezantsi yi-2 BHK enegumbi lokuhlambela langoku elinezixhobo zeJaquar. Kukho i-TV eholweni, ibhedi eyi-queen eyi-1 kwigumbi lokulala kunye nenye ibhedi yobukhulu bendlovukazi kwelinye igumbi. Oomatrasi bomgangatho owongezelelweyo banokucwangciswa ngokwesicelo. Iifeni zesilingi zeBLDC ezinendawo ekude zibonelelwa kuwo onke amagumbi.
Ekuseni uya kuvuswa ziingoma zonqulo ezisuka kwitempile ekude kwaye ubuliswe kukuntyiloza kweentaka ezininzi.
Ukuba uthanda ukukhwela iintaka yiza nekhamera yakho. Ukuba unethamsanqa usenokukwazi ukufota ngekhamera isiqongqothwane, iibarbets zemikhandi yobhedu, ibarbet enezidlele ezimhlophe, ibulbul ephuma umoya ebomvu, idrongo emnyama, imyna, njl.
Ebusuku usenokubona umlilo omenyezelayo ubhabha kwaye uve nezandi zeqakamba namasele. Okanye unokujonga nje iinkwenkwezi ngelixa ufumana ubushushu bomlilo ovuthayo owabelana ngamabali nabahlobo.
Ibhedi enkulu eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-4
Thatha indlela engahambanga kancinci kwaye ujonge amahlathi anyulu, amachibi acwengileyo, iintaba ezintle kakhulu, ubone izilwanyana zasendle kwindawo yokuhlala yendalo, hamba kwiidolophu zesizwe nokunye okuninzi. I-Wayanad ikunika indlela engaphaya kwamava.
Thatha ixesha lokuhamba kwibala lepaddy ukuya kwirivulet engapheliyo iNarasi ekumgama nje weemitha ezingama-200 ukusuka kwipropathi kwaye ukonwabele ukuhamba emanzini. Lo mlambo udibana nomlambo odumileyo iKabani ezantsi komlambo.
Unokuzama nethamsanqa lakho ekulobeni kwi-rivulet, ngexesha lemvula abantu basekuhlaleni babambisa kakuhle.
Hamba-hamba kwindawo yethu yeehektare ezi-3.5 zekofu ekumgama omalunga nekhilomitha. Ukuba unethamsanqa unokubona iipikoko nemivundla yasendle .
Amachibi amabini acocekileyo kunye nechibi lothando ajikeleze i-1 Km kude nepropathi kwaye afanele ukutyelelwa.
Kallu (isiselo sakwaThixo)! ICoconut Toddy/Iwayini ifunjwa kwincindi yeentyatyambo yekhokhonathi yePalm. Sisiselo esinxilisayo esithambileyo . Ukuba ungumntu osaqalayo musa ukuziyolisa kakhulu njengoko itoddy inencasa unokufumana ukuphakama okuncinci kwaye i-hangover ayilunganga kangako.
Ivenkile ye toddy enelayisensi karhulumente ikufutshane nje malunga ne-2 Kms kude nendawo yethu. Bakhonza toddy ezibhotileni kunye nezinto zalapha ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Bijith
Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe. Umgangatho wonxibelelwano uya kuxhomekeka kundwendwe. Ndingathanda ukusebenzisana kwaye ndidibane nazo zonke iindwendwe kodwa andikwazi ukwenza oko njengoko ndihlala kwisixeko esahlukileyo (eMumbai). Iindwendwe zingasoloko zikhululekile ukunditsalela umnxeba nangaliphi na ixesha kwiselfowuni yam 9892606060. Indawo yethu yonxibelelwano yasekhaya ehlala kwindlu engaphaya kwendlela iya kubakho ukujonga iindwendwe kwaye iya kufumaneka ukuze ithathele ingqalelo zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke. Indawo yonxibelelwano iya kukuhoya kwaye ikhathalele zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile. Unako ukwenza amalungiselelo ezothutho kwaye akwakukhokele malunga neendawo zasekuhlaleni ezinomdla kwaye alungiselele ukutya kwiivenkile zokutyela ezikufutshane.
Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe. Umgangatho wonxibelelwano uya kuxhomekeka kundwendwe. Ndingathanda ukusebenzisana kwaye ndidibane nazo zonke iindwendwe kodwa andikwazi ukwenza…